Koorsada AutoCAD 2013 - Geofumadas
Koorsada AutoCAD 2013
12.1 Xayiraad Joomatari
Sida aynu hadda soo sheegnay, xayiraadda joomatari waxay dejinaysaa habka joomatari iyo xidhiidhka walxaha marka loo eego kuwa kale. Aynu aragnay mid kasta: 12.1.1 Dhibaatayntu waxay xakamaynaysaa sheyga labaad ee la soo xulay si ay ugu habboonaato qaar ka mid ah dhibcooyinkeeda iyadoo leh qayb ka mid ah sheyga koowaad. Marka aynu dhaqaaqo walxaha sheyga, Autocad wuxuu muujinayaa ...
Koorsada AutoCAD 2013, Koorsooyin Bilaash ah
QEYBTA 12: XADGUDUBTA WAXAYNTA
Marka aan isticmaalno tixraac si loo dhammeeyo walxaha, ama xarunta, tusaale ahaan, dhab ahaantii waxa aan sameynayno waa ku qasbeynaa sheyga cusub in ay la wadaagto joometirigeeda shay kale oo hore loo soo dhejiyey. Haddii aan isticmaalno tixraac ah "Barbaro" ama "Dareemo" wax isku mid ah ayaa dhacaya, waxaan ku qasbeynaa geometric of shayga cusub ee ku saabsan ...
QEYBTA 11: BARNAAMIJKA POLARKA
Aan ku laabano sanduuqa "Drawing Parameters". The "Tracking Polar" tab wuxuu kuu ogolaanayaa inaad habeynta qaabka magaca isla. "Polar Scan", sida "socodka walxaha tixraaca", abuuraa laymanka dhibcaha, laakiin kaliya marka dulqabo u soo gudbo xagal khaaska ah, ama u kordhiyaa mid ka wadataa ee ...
QEYBTA 10: UGU DANBEEYEY SHEEGASHADA KOOXAHA
"Trace Trace Trace" waa qiimo qiimo leh oo ka mid ah astaamaha "Nooca Tixraaca" si aad u sawirtid. Hawlgalku waxa weeye in lagu sawiro khadadka wareegyada ku meel gaarka ah ee laga soo saari karo "Tixraacyada sheyga" ee hadda jira si loo helo signal iyo helno qodobo dheeraad ah inta lagu jiro fulinta amarrada sawirrada. Si kale loo dhigo, halka ...
9.1 .X iyo Foomaha Doodaha
Diidayo tixraacyada sida "From", "Midpoint dhexeeya 2 dhibcood" iyo "Extension" noo oggolaan in ay fahmaan sida Autocad tilmaamaya kartaa dhibcood in aadan si sax ah ma u dhigma joomateri ee walxaha jira laakiin laga dheefay karaa fikrad this in barnaamijyo leeyihiin loo isticmaalay qaabeynta qalab sawir oo la yiraahdo "Filters Point" in ...
QEYBTA 9: LOOGU TALAGALAYO WAXYAABAHA
Inkasta oo aan horay u eegay farsamooyin badan barbaro walxaha kala duwan si sax ah ku dhaqanka, sida sawirka keensataa kakanaanta, waxyaabaha cusub waxa inta badan abuura oo had iyo kaalinta la xiriirta wixii horay loo barbaro. Taasi waa, walxaha horayba u jirey sawirkeena waxay na siinayaan tixraacyada joomatariga ee alaabta cusub. Iyadoo ...
Iyada oo aan aragno ilaa hadda, waxaan ognahay in "jiidis" khadka iyo abuurista walxaha qoraalka ee xariiqa waa hawsha si dhaqso ah oo sahlan loo samayn karo Autocad. Dhab ahaantii waxay noqon lahayd wax kasta oo ay qaadan lahayd si ay u sameyso miisaska si fudud oo dhakhso ah, isku darka, tusaale ahaan, xariijin ama polylines leh sheyga qoraalka si loo abuuro ...
Marar badan, sawiradu waxay u baahan yihiin wax aan ka badnayn hal ama labo erey oo sharraxaad ah. Xaaladaha qaarkood, si kastaba ha ahaatee, qoraalada lagama maarmaanka ah waxay noqon karaan labo ama ka badan cutubyo. Kadibna, isticmaalka qoraalka xariiqda gabi ahaanba waa shaqeyn. Halkii, waxaan isticmaalnaa qoraallo dhowr ah. Doorashadan waxaa lagu furfuray ...
Habka qoraalka ayaa si fudud u qeexaya sifooyinka noocyada kala duwan ee hoos imanaya magac gaar ah. In Autocad waxaan abuuri karnaa dhammaan noocyada aan rabno ee sawirka ka dibna waxaan u wehelin karnaa shay kasta oo qoraal ah qaab gaar ah. Xaddidaad qaraabo ah ee nidaamkaan waa in qaababka la abuuray la isku duubay ...
8.2 Editing Objects Text
Laga soo bilaabo cutubka 16 ee kor ku xusan waxaanu ka qabannaa arrimaha la xidhiidha daabaca walxaha sawirka. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan halkan ka arki karnaa qalabka la heli karo si loo saxo walxaha qoraalka ah ee aan hadda abuuray, maaddaama dabeecaddoodu ay ka duwan tahay waxyaabaha kale. Sida aad arki doonto ...
8.1.1 Fields ee qoraalka
Waxyaalaha qoraalka ah ayaa ku jiri kara qiimaha ku xiran sawirka. dabeecad Tan waxa loo yaqaan "beeraha Text" oo waxay leeyihiin faa'iido ah in xogta la soo bandhigay ay ku xiran tahay sifooyinka of shay ama koobin in sidaas daraaddeed waxaa la xidhiidha in la simay haddii ay bedesho. Haddii si kale loo dhigo, ...
8.1 Qoraal xaraf
Xaalado badan, faahfaahinta sawirka wuxuu ka kooban yahay hal ama labo erey. Waa caadi in la arko qorshooyinka dhismaha, tusaale ahaan, erayada sida "jikada" ama "Facade North". Xaaladaha sidan oo kale ah, qoraalka xariiqda ayaa sahlan in la abuuro oo la helo. Sidaa darteed, waxaan isticmaali karnaa "Qodobka" qoraalka ama badhanka ...
8 BOOQAN: TEXT
Dhab ahaan, dhammaan dhismaha muraayadaha, injineernimada ama farsamooyinka sawirada waa in lagu daraa qoraalka. Haddii ay tahay qorshe magaalo, tusaale ahaan, waxa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu daro magacyada waddooyinka. Sawirada waxyaallaha farsamoyaqaanku waxay badanaa leeyihiin qoraallada aqoon isweydaarsiga waxaana jiri doona kuwa kale, ugu yaraan, ku jiraan magaca ...
Sida kiisas hore, waxaan isticmaalnaa nidaam isku mid ah si loo dhiso caddaynta sheyga: waxaan xulanaa kadibna waxaan dhisi karnaa qiimaha u dhigma kooxda "Guryaha". Si kastaba ha ahaatee, waa in la ogaadaa in qiimaha hufnaanta aysan waligeed noqon 100%, maadaama ay noqon doonto mid aan muuqan shayga. Sidoo kale ...
Maqnaanshaha Khadka 7.3
Dhumucda xariiqtu waa kaliya, ballaadhka xariiqda shayga. Iyo sida kiisaska hore, waxaan u bedeli karnaa dhumucda xariiqda shayga leh liiska hoos-u-dhaca ee "Guryaha" kooxda "Home" tab. Waxaan sidoo kale heysanaa sanduuqa wada-hadalka si aan u dejinno xuduudaha la sheegay ...
7.2.1 Qalabka Alphabet
Hada, ma ahan in la isticmaalo noocyada kala duwan ee khadadka si shey aan shuruudo lahayn. Xaqiiqdii, sida aad ku arki kartid magacyada iyo sharaxaada noocyada khadadka ee "Daariiqda Nidaamka Tiirka", noocyada intaa ka badan waxay leeyihiin ujeedooyin qaas ah
7.2 Noocyada khadadka
Nooca xariiqa sheyga ah ayaa sidoo kale la badali karaa iyadoo la dooranayo liiska hoos-u-dhiganta ee Kooxda Guryaha ee ku taal guriga, marka shayga la xushay. Si kastaba ha ahaatee, qaabka hore ee Autocad ee sawirada cusub waxaa ku jira hal nooc oo adag. Marka, bilowgii, ma jiraan wax badan oo ...
Marka aan doorano shay, waxaa lagu muujiyay sanduuqyo yaryar oo la yiraahdo xaglaha. Sanduuqyadani waxay naga caawinayaan, waxyaabo kale, si loo saxo walxaha sida lagu baran doono cutubka 19. Waa lagama maarmaan in ay halkaan ku soo sheegaan sababtoo ah marka aan doorannay mid ama wax ka badan oo shay ah, sidaa daraadeed, "baro", waxaa suurtogal ah in wax laga bedelo ...